Ọ bụla mbipụta banyere Spotify iOS Chọta gị ngwọta ebe a
E nwere ọtụtụ iri puku mbipụta nke a ojiji ihu mgbe Spotify ngwa a na-eji on iOS. Ụfọdụ okwu ndị nnọọ n'ozuzu na ọdịdị mgbe ndị nke ọzọ na-ngwaọrụ ma ọ bụ ime ihe kpọmkwem nke na-eduga na ọrụ n'ime nsogbu. Kasị nkịtị nke bụ na ndị okenye na nsụgharị nke iOS ike nke na nsogbu maka Spotify ọrụ na mgbe iOS nke ngwa a na-emelite bụ na-akpata a otutu mbipụta. A nkuzi dị na akara na chọrọ nke isiokwu na ya mere ọ na-eme n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma.
1. Olee ibudata na ịwụnye Spotify maka iOS
2. Olee otú ige ntị Spotify iOS?
Olee otú ibudata na wụnye Spotify maka iOS
Iji jide n'aka na ọ usoro dị na akara na ihe ndị a chọrọ ndị ọrụ ọ na-e kọwara na ụzọ kasị mma na-eme ka n'aka na nzọụkwụ na-kọwara nke ọma ihe na-enyemaka nke screenshots mere na n'ozuzu echichi na-aghọ mfe n'ihi na onye ọrụ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ndị kasị elu nkuzi kọwawo ebe a iji jide n'aka na ọrụ na-pacified na ha na-arụpụta ihe kasị mma na ikwu na download. The usoro e kọwara ọtụtụ iri puku ndị oge online Ma, ọtụtụ ndị Filiks na-nnọọ ike na nka na ụzụ na ọdịdị ruru ka nke a novice ọrụ adịghị enwe ike zuru uru ma nke a usoro e kọwara otú ahụ na nke ana achi achi na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe N'ihi na nke a na-ọkọkpọhi kasị mma na ya apụta mgbe ọ na-abịa na nbudata na echichi nke ngwa.
The mfe ụzọ kọwaa ihe nakwa na e weere na nke a na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị-eso usoro nzọụkwụ site nzọụkwụ na-enweghị nzọụkwụ ọsọsọp otú ahụ pụta bụ maa otu dị ka onye ọrụ chọrọ inwe. Nzọụkwụ na-nọ mfe ma maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ngwa na-eme na n'otu ụzọ ka e kọwara ebe a iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu ọ dịghị egwuregwu na mkpokọta arụmọrụ larịị na a chọrọ bụ imezu na nke kacha mma n'ụzọ na-arụ ọrụ mere na àgwà, ịke na klas. Nzọụkwụ ndị dị ka ndị:
1. The mobile nnyocha peeji nke na http://www.spotify.com/int/mobile/overview/ bụ na-ele ya anya na-eme ka n'aka na iPhone dakọtara ụdị na-achọgharị ihe na ihe nlereanya na a na-eji na-anya elu otú na onye ọrụ mgbe Downloads ma ọ bụ installs ọ bụla na-ezighị ezi version:
2. The ngwa ahịa na akara ngosi na-ahụ na-enwe iji jide n'aka na usoro ọganihu na ngwaọrụ metụtara usoro Pop elu iji hụ na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma na nke a na ikike direction bụ sokwaara:
3. Onye ọrụ kwesịrị eme ka ahụ n'aka na search taabụ na-enwe na isiokwu Spotify na-mesịa n'ime iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi ngwa depụtara n'ime ngwa ahịa:
4. The ngwa bụ mgbe ahụ na-arụnyere site na ịme ọpịpị na Get button iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma:
5. The apple ID bụ mgbe ahụ na-banyere iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a na nwụnye usoro nwekwara agwụ ebe a. Usoro bụ pụtara dị mfe na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na nzọụkwụ-agaghị ọsọsọp ma ọ bụrụ na ndị kasị mma pụta bụ inwe ahụmihe a:
Iche mgbe download na wụnye na iOS 9, iOS 8, iOS 7, iOS 5
E nweghị kpọmkwem dị iche mgbe ngwa na arụnyere na n'elu usoro nke dị n'okpuru ụka ma naanị ihe dị iche na nke a bụ na onye ọrụ kwesịrị ilegara anya maka mkpa iOS mbipụta nke Spotify ngwa iji jide n'aka na usoro a soro na nke kacha mma n'ụzọ na onye ọrụ ọkọkpọhi arụpụta ihe kasị mma. Maka ọrụ na ndị okenye na nsụgharị nke iOS ọ na-gwara iji jide n'aka na Spotify ngwa ekwesịghị-emelitere na niile ma ọ bụghị n'ebe dị oké nke nke ndakọrịta nke etịbe na disallows onye ọrụ na-anọgide na n'ihu na ngwa.
Olee otú ige ntị Spotify iOS?
Nke a bụ isiokwu nke metụtara ndị nchịkọta ma ọ bụ ndebanye aha na e ulo oru site na ụlọ ọrụ na nke a na N'ihi ya, ha ga-esịne ke akụkụ a n'ụzọ zuru ezu iji jide n'aka na onye ọrụ bụghị nanị na osịmde arụpụta ihe kasị mma mgbe ị na-ahọrọ otu kamakwa jide n'aka na ojiji nke ngwa na-atụle nke a.
Spotify ikpe iOS na Spotify adịchaghị iOS
Mgbe ọ na-abịa Spotify ikpe onye ọrụ na-akawanye a free 7 ụbọchị nzọ ụkwụ iji hụ na ngwa na-eji na ọkaibe ndị na-anya. Mgbe ọ na-abịa Spotify adịchaghị iOS mgbe ahụ, ọ bụ na--ahụ kwuru na ndenye aha na-akwụ ụgwọ na e nwere ọtụtụ ndị nchịkọta na-abịa n'okpuru nke a na ngalaba iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ndenye aha dabeere na mkpa na-achọ n'aka na nke a. Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na ihe kasị mma ọrụ na nke a bụ họọrọ na enyemaka nke na ojiji na akpọ onye ahụ mgbe Spotify ngwa na-eji. The Spotify ikpe iOS okokụre mgbe 7 ụbọchị na onye ọrụ kwesịrị maa anya n'ihi na a na-akwụ ụgwọ na ndenye aha ma ọ bụ ọzọ na atụmatụ nke ngwa ga-egbochi. Na-esonụ bụ ụfọdụ ndị na-a onye ọrụ nwere ike iji na nke a mgbe ọ na-abịa Spotify ngwa:
1. The search mmanya na-emi odude na elu na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na onye ọrụ nwere ike na-ege ntị mmasị songs na mkpokọta ngwa management na-eme na ihe kasị mma n'ụzọ:
2. Against ọ bụla ngwa e nwere bọtịnụ nke onye ọrụ kwesịrị ka pịa iji jide n'aka na a dobe ala menu abịa na n'ebe onye ọrụ nwere ike ịmepụta ọhụrụ playlist na ala:
3. The redio nwekwara ike-ege ntị ka site na ịme ọpịpị redio bọtịnụ nke na-emi odude ke ekpe sidebar:
4. The ọrụ nwekwara ike ime ka n'aka na audio preview ngwá ọrụ a na-eji jide n'aka na atụmatụ nke songs na-hụrụ na ọ nwekwara ike-eji na-eme ka n'aka na songs na-egwuri:
Ọ Spotify iOS
Google Chromecast bụ ọrụ na-enye ohere onye ọrụ na-eme ka n'aka na internet ọdịnaya streamed n'elu TV ma ọ bụ ngwaọrụ nke oke na ọ na-eme na enyemaka nke USB dongle a na-site na ụlọ ọrụ na nke a. The ngwaọrụ nwere ọtụtụ uru na ọghọm mgbe ọ na-abịa ojiji na-esonụ bụ ụfọdụ n'ime ha depụtara na kasị mma n'ụzọ iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi nsonaazụ kacha mma:
• Ọ bụ ihe dị egwu ụzọ jide n'aka na internet ọdịnaya streamed na ala na afọ ojuju n'elu ngwaọrụ nke oke.
• The Chromecast bụ ụzọ kasị mma iji hụ na nke mgbe gụgharia mgbe chere ihu dị ka ọ na kwadoo site na steeti nke nkà nkà na ụzụ nke Google.
• The n'ozuzu gụgharia ọsọ bụ ihe kasị mma nke na-enye ohere Google ka ha sikwuo ike subscriber isi na egwu larịị nke ọrụ bụ ihe kasị mma so na-akpata.
• The ngwaọrụ adịghị arụ ọrụ na ngwaọrụ ndị na-okenye na ọdịdị dị otú ahụ dị ka ndị nke na-adịghị ihe HDMI mmepụta na nke a.
• The usoro adabere a dongle na ọ bụrụ na a dongle bụghị iji mgbe ahụ onye ọrụ ga-enwe ike iji usoro.
1. The Chromecast ngwa bụ na-arụnyere n'elu iDevice na iji njikọ https://itunes.apple.com/gb/app/chromecast/id680819774?mt=8 na ozugbo ọ e mere onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na ngwa na-tapped imeghe na Wi-Fi na jikọọ na Chromecast:
2. The ọrụ mgbe ahụ kwesịrị imeghe Chromecast Mbido n'elu ekwentị na chọrọ Ama bụ mgbe ahụ na-banyere:
3. The ngwaọrụ nke gụgharia a chọrọ bụ mgbe ahụ na-họrọ site na ịpị tinye ngwaọrụ button iji jide n'aka na usoro-agwụ ebe a na ọdịnaya gụgharia amalite:
> Resource> iOS> ọ bụla Issues Banyere Spotify iOS Chọta gị Solutions Lee